Islam anoda kutora pamusoro kuSweden | Apg29
Pane hondo yomudzimu nyika yedu pakati chiKristu uye Islam.
Pane vaMuslim vakawanda achangopfuura makore nyika yedu akasarudza nzira yechiKristu, kure ruvengo nechisimba. Ndizvo zvakanaka pamamiriro ezvinhu, ukuwo Islamist kutyisidzira anowedzera.
Kusangana - nyaya huru
Mukusarudza enyika vari kutaura kuti kusangana ane nyaya inokosha. Zvakajeka haringanzi akati.
Zviri pachena, hazvina akazochena kuti kurerutsa nyaya inokosha. Chii chatingaita pamusoro ichi yacho zvakakomba? Mhinduro chinorwadza ndechokuti "kwete chaizvo" kana "anenge hapana".
Chikonzero netariro zvanzi musayendisiti, Professor Ruud Koopman akapedzisa. Ane makore anopfuura 20 kutsvakurudzwa ari kusangana uye kuitwa pakati vaMuslim Europe.
In Norwegian pepanhau Document anogona kuverenga zvaari kubuda. mhedziso yake: Islam ambotirega haana kuwiriraniswa hweruzhinji uye Western munzanga. Zviri Hapana mubvunzo zvakatoomesesa nokusangana vaMuslim pane mamwe mapoka vatamira Western munzanga.
Nechekare muna 2013 Koopman yakabudisa mushumo pamwe kuenda Ongororo inoratidza kuti zvikamu zviviri kubva muzvitatu avo vakabvunzwa VaMuslim vanotenda kuti mitemo yechitendero dzinokosha kupfuura mutemo vanogara munyika.
Hapana vanhu Western akabudirira kusanganisa vaMuslim. Saka, zviri zviripo kuti Sweden kuti kubudirira chii hapana mumwe nyika yabudirira.
Izvi nokuti anenge akasiyana netsika, chitendero, uye Mindset kuti dzinopesana pamwe vanhu Swedish.
A mhinduro Zvisinei, uye kuti kana vaMuslim Achatendeutsa kutenda kwechiKristu. Kune mienzaniso yakawanda yevaya danho iri, yakanakisisa vakakwanisa nokusangana kupinda vanhu.
Pasinei neizvi, kusarudza Kutama Board achiri kuti vadzinge vazhinji ava vechiKristu vatendeuka, apo vakawanda - vaya vasingadi nokusangana - kuramba. Izvi zvinogona kuva kunoparadza chikanganiso!
Kana iwe sei musoro saka kuverenga nyaya ino uye ona mienzaniso zviri kuitika munyika yedu.
Soheila Fors ane zvinoshamisa gave utet, iye akaberekwa ari Iran uye akasvika akazotevera Sweden. Nhasi iye muKristu akasimba uye ane ruzivo vose Islam kutenda kwechiKristu. Mune imwe nyaya iri The World Nhasi iye anotiudza pamusoro chiitiko:
"Zvino pachivara apo ndaiva caucus uye akauya kwandiri akakuitira. Chidzitiro akanga agere zvakakwana, sezvinoita anozvidza achinyemwerera. Saka vakatanga kukurukurirana kuti akanga asiri kukurukura pasina kunzwa. Kana iye haasi kuwana kwese, yakanga nguva kutyisidzira: Tauya pano kuzotora pamusoro. Hapana anofanira kudzidza Swedish, munhu wose anofanira kutaura Arabic. Kana tine simba, vacharaswa kumanikidzwa kupfeka chifukidziro.
Kudanidzira akapa manakire zvakaipa mumuromo mangu nokuti Ndakasangana vakawanda kufanana naye nguva zhinji kudaro. Icho chitendero udzvinyiriri mombe kuti nguva dzose kuridza zvakafanana, zvose zviri 1980s Iran iri 2020 kuti Sweden. "
Tichavonga yakasiyana mufananidzo Sweden, iko kubva Hjällbo, weChicago Gothenburg. World Today anopa mufananidzo zvakaitika apo vaKristu vatatu evhangeri muna Square.
Zvino paiva mukomana kubva muchikwata uye anoti: ". Une maminitsi matatu kutora kubva pano, kana Ndichaenda kupfura iwe"
The Chiitiko pamhemberero Ramadan uye chikwata akataurawo kuti "All kutsanya pano. Tiri vaMuslim. Hatidi nemi pano. "
Anotevera akataurwa mashoko vechiMuslim: ". Hatidi imi pano" "Tauya pano kuzotora pamusoro" uye
Izvi zvinoratidza kuti pane hondo yomudzimu nyika yedu pakati chiKristu uye Islam. Zviri ikozvino yakakwirira nguva vaKristu uye vezvematongerwo enyika kuti kumuka uye tora zviitiko izvi zvakakomba.
The Islamists vari kuwedzera kuSweden
Hapana munhu anofanira kufunga kuti Sweden ndiyo yaidzivirira pakona nyika pokudzora Islamists. Mushumo Toad unoratidza unopinza zvibereko Islamists muSweden.
On TV, teletext uye dzimwe nhau dzakawanda aigona kuva June 11 kutora chikamu FBI kuti Nhamba iri kuwanda Islamists muSweden.
Fredrik Hallström, mutevedzeri musoro rokurwisa anoti: "Tiri kunetseka kukura." Zvinonzi akati pamushumo: "The simba yava kuenda pamusoro tsamwisa unesungano nhamba kukuru Islamists muSweden yakawedzera zvikuru mumakore achangopfuura, kubva mazana kusvika zviuru. Muna May, anotova matanhatu Islamists vakakurumbira wavharirwa. "
ikozvino Pane zviuru (!) Islamists kuSweden. Mumwe izvi zvinogona kunzi vanoumba zvinogona kukanganisa kuchengetedzwa nyika yedu. Zvichida Zviri nyaya nguva tisati angatanga kuona kukuru Islamists kuita chero nzira.
Pakave rakapinza kuwedzera kwenhamba vaMuslim muSweden muna achangopfuura makore.
In pekufa uyu zvichifambirana unopinza kuwedzera Islamic. The Islamists kuita chinhu muzita yezvavanotenda, kusanganisira vachiridza mudenga kuuraya vamwe.
Muna June, kuti Security Service kudzinga imams maviri (!), Ndiani ave achishanda ari mosques. Dzimwe nhengo kukuru Islamist kwezvakatipoteredza yavewo wavharirwa ne Security Service.
The munhuwo Muslim tichifanira kuda uye kuwana Jesu. Rudo rwaJesu runoita muMuslim kuti vateveri rudo vaJesu pane kuva Islamists.
Kana uri kuverenga izvi vari vaMuslim unofanira kuziva kuti iwe unodiwa naMwari. Naizvozvo ita zvakafanana nezvimwe uye kuzviudza shoko rudo.
Articles uye mavhidhiyo izvo zvinoitwa nevamwe pane Apg29 vanomiririra zvavanofunga.